HomeTURKEYTurkish Aegean20 DenizliXarunta Denizli Ski Center oo ku orda rikoorka tirada dadka soo booqda
13 / 01 / 2020 20 Denizli, Turkish Aegean, GUUD, TURKEY, TELPHER
denizli ski dalxiis wuxuu diiwaan geliyaa tirada dadka soo booqda
Xarunta Denizli Ski Center, oo ah mid ka mid ah meelaha loogu jecelyahay ciyaaraha jiilaalka, ayaa ku orda rikoorka tirada dadka soo booqda. Ku dhawaad ​​50.000 oo qof ayaa booqday xarunta xilligan cusub, Duqa Cusmaan Zolan iyo xaaskiisa, Berrin Zolan, waxay noqdeen shuraako ku raaxeysta faa'iidooyinka muwaadiniinta.
Xarunta Denizli Ski Center, oo ah mid ka mid ah mashaariicda ugu muhiimsan ee ay hirgalisay Dawladda Hoose ee Magaalada Denizli, waxay ku shaqeysaa inay diiwaangeliso tirada dadka soo booqda. Recently, mid ka mid ah meelaha ugu doortay ciyaaraha jiilaalka ee Turkey iyo 4 waxay ku dhowaayeen 50 kun oo martida marti by dooranaya Denizli Ski ah ilaa xilli ciyaareedka cusub hadda. Turkey ayaa sii wadaan in ay muwaadiniinta ciidankii doonaya inay la kulmaan in badan oo magaalada ka orda xirfadeed iyo hiwaayadda iyo snowboarders laga bilaabo 7 ilaa 70 xarumaha meel kuwa doonaya in ay sameeyaan baraf. Duqa degmada Denizli ee Magaalo Weyn Cusmaan Zolan iyo xaaskiisa Berrin Zolan ayaa sidoo kale booqday garoon barafka.
Waxay ku madadaalin jireen carruurta
Duqa magaalada Cusmaan Zolan iyo xaaskiisa Berrin Zolan, oo iyagu iska kaashanaya ka faa'iideysiga faa'iidooyinka muwaadiniinta, ayaa lagu soo dhoweeyey bandhigyo kalgacal leh. Muwaadiniinta, iyaga oo muujinaya in ay aad ugu faraxsan yihiin Xarunta Denizli Ski Center, ayaa u mahadcelisay Duqa Magaalada Zolan oo keenay magaaladii dalxiiska. Duqa Cusmaan Zolan oo la sheekaynaya muwaadiniinta wakhti yar, riixaya dhaleeceynta carruurta ee ku dhaceysa aagga sled waxay ahayd goobta sawirada midabada leh. Sawirro badan oo xasuus badan ayaa lala qaatay muwaadiniinta intii lagu jiray booqashadii lamaanaha Zolan markii dambe gudoominayay shirweynihii M3. Duqa magaalada Zolan wuxuu kaloo la kulmay caruurta aan qaan gaarin oo koorasyo ​​baraf barasho bilaash ah ka bixiya Dowlada Hoose ee Magaalada Denizli una rajeeyay guul.
Baddeena ayaa fikir ka dhiibtaa xilliga dalxiiska ee jiilaalka artık
Duqa Cusmaan Zolan ayaa sheegay inay aad ugu faraxsan yihiin xiisaha aadka u weyn ee xarunta Denizli Ski Center iyo in xarunta ay soo martay muddo aad u dheer waqti gaaban isla markaana ay yihiin meelaha ugu doorka wanaagsan ciyaaraha isboortiga xilliyadii dhawaa. Isagoo carabka ku adkeeyay in tayada barafka barafka leh ee Denizli Ski Center ay ku yaalliin tirada xarumaha adduunka, Duqa Zolan wuxuu yiri, “Wadooyinkayaga 13-ka dheer ee barafka ah oo u adeega dhammaan hiwaayadda iyo xirfadleyda, tasiilaheena farsamada ee qaadi kara 2.500 qof saacadiiba, qaab dhismeedkayaga bulsheed ee la kulma dhammaan baahiyaha maalinlaha ah ee booqdeyaashu ma ahan oo keliya Denizli. waxaan u adeegaa shacabkeena hal dhinac. Waxaan leenahay xarun aad u wanaagsan oo hawadeeda, wadooyinkeeda iyo dhamaan dhismaheena. Xiisaha loo qabo barafka weyn ee Aegean ayaa maalinba maalinta ka dambeysa sii kordhaya. Baddaheenna waxay fikrad ka dhiibataa dalxiiska xilliga qaboobaha. ”
Tareenka xawaaraha sare ee Eskisehir Konya ayaa ku socda rikoodhka gaadiidka rakaabka (Video)
Nidaamka Macluumaadka Gaadiidka Dadweynaha ee Antalya wuxuu u socdaa Diiwaanka
TCDD ayaa si dhakhso ah u socodsiiya Adeegga Gaadiidka Casriga ah ee Dalxiiska
Gawaarida basaska ee ku socda wadada tareenka
Shiinaha ayaa maamula tareenka adduunka oo dhan
Xarunta Sare ee Xarunta Karacadağ waxay qortay rikoodhada booqashada
400 kun oo booqasho oo ku yimid Davraz Ski Resort
Xarunta Muraayadaha Dabka Murat Mountain The Smal Center ayaa sugaysa booqdayaasha
Kubbad sameeyaha Mareykanka Vonn ayaa ku biirey rikoorka
IZBAN oo rukun u ah
Meesha Sledding ee Denizli ski dalxiis
Booqdeyaasha Xarunta Denizli Ski Center